Ukwahluka kunye nokuThengisa | Martech Zone
Ukwahluka kunye nokuThengisa
NgoLwesithathu, Oktobha 18, 2006 NgeCawa, Oktobha 4, 2015 Douglas Karr
Ndifanele ndifunde iposi kokwahluka kunye nomhlobo wam omtsha, JD Walton. I-JD isungule ibhlog ethengisa kubantu abaNtsundu kwishishini. Libali lempumelelo laseMelika kwaye ufuna ukwabelana ngamava akhe nabanye.
Kwandichukumisa kakhulu kangangokuba mna ayenayo ukubhala malunga neengcinga zam ngokwahluka. Ukwahluka kunento yokwenza nokuThengisa kunye nokuZenzekelayo? Inantoni yokwenza noDoug, lo mfana umhlophe uneminyaka engama-38 ubudala? Yonke into! Ilizwe lethu kunye nehlabathi lethu liya lisanda ngokwanda mihla le. I-intanethi iba yindawo yokunyibilika yokwenyani njengokufikelela okufikelelekayo kunye nezixhobo zekhompyutha eziza ebantwini.
Kuya kufuneka uhloniphe kwaye uthethe kuzo zonke iintlanga, iinkolelo kunye nesini ukuba unqwenela ukuphumelela. Ukuba ishishini lakho linqwenela ukukhula, inkampani yakho kufuneka yahluke ngokunjalo. Akunakho ukukhonza icandelo lentengiso ngokufanelekileyo ukuba awunayo igalelo elivela kwicandelo lentengiso.
Abanye abantu bajonge ngaphakathi kwiinkqubo ezahlukeneyo kwaye bazisebenzise njengesizathu sokunganyuselwa okanye ukuthetha komnye umntu ukuba anyuselwe ngaphambi kwexesha. Ndiyakholelwa ukuba oku kufutshane kwaye mhlawumbi kukungazi kancinci. Ukubeka inyuselo kuhlanga lomntu othile, isini, njl.njl kwaye kuya kuvula amathuba kwishishini nakumntu ngamnye.
Nanku umbuzo wezigidi zeedola… xa inkampani yakho ikhula ngempumelelo ngokukhuthaza ngenkuthalo amancinci nabasetyhini, amathuba amatsha aya kuza kuye wonke umntu ophakathi kwenkampani. Yinkukhu okanye iqanda. Mhlawumbi ngekhe ubenalo ithuba lokunyuselwa ngaphandle kokufumana indawo yokusebenzela eyahlukileyo kwasekuqaleni!
ISalesforce.com ayisebenzi ne-Intanethi Explorer 7 (Ngokwenyani iyasebenza!)
Okt 22, 2006 ngexesha 9:35 AM
Leyo yayiyithuba elicingayo. Ndicinga ukuba isivakalisi sakho sokugqibela sisisongelo esihle.
Novemba 11, 2006 ngo-8: 07 PM
Kuqhelekile ukuba ukuqeshwe okumbalwa kube ngumcimbi wokuziphatha, emva koko yaba ngumcimbi weshishini, ngoku ngumba wokungaziphathi kakuhle. Kungekudala i-ther iya kuba yimisebenzi emininzi kunabantu yokuyigcwalisa, sisizathu sokukhutshelwa ngaphandle. UDoug ngekhe ubize umntu otyebileyo ongumntu omhlophe oneminyaka engama-38 ubudala, ngaphandle kokuthetha umhle kwaye uyathandeka. Ukukhetha kwakho isiqu sakho, kuyinxalenye yeyantlukwano kwaye kuxhomekeke kwimizekelo yobukho babantu. Uninzi lwabafana abamhlophe bacinga, iyantlukwano ithetha enye into, xa enyanisweni, wonke umntu ahlukile kuluntu olwahlukeneyo, ngobudala obahlukeneyo, ubudala, ubungakanani, ulwakhiwo losapho, inkanuko yesini, ezopolitiko kwaye njengoko sisazi kakuhle, isini kunye nobuhlanga. Iposti elungileyo